Bheeshma (2020) | MM Movie Store
ဒီကားထဲက မငျးသား Nithiinကို အိန်ဒိဇာတျကားခဈြသူတှေ သိပျမသိလောကျပမေယျ့ အပွုံးလှလှပိုငျရှငျလေးဖွဈတဲ့မငျးသမီးခြောလေး Rashmika Mandanna ရဲ့ ဇာတျကားမို့ ကွညျ့စခေငျြတဲ့ စတေနာနဲ့ တငျဆကျလိုကျတာပါ။
ဇာတျကားအကွောငျး နညျးနညျးပွောရမယျဆိုရငျ… ရုတျတရတျကွညျ့ရငျတော့ ဒီဇာတျကားကဝနျကွီးခြုပျမငျးသားလို့ချေါတဲ့ Mahesh Babu ရဲ့ ဝနျကွီးခြုပျဇာတျကား(Bharat Ane Nenu)နဲ့ Maharshi ဇာတျကားကိုinspiration ယူပွီး ရိုကျကူးထားတယျလို့တောငျ ထငျခငျြစရာပါပဲ။
ဒါပမေယျ့လညျး ကှဲလှဲနတောတှတေော့ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ဒီကားထဲကမငျးသားဟာ တလေဂေပြိုး ၊ ကောလိပျကနေ အထုတျခံလိုကျရတဲ့သူ။ဘ၀မှာ ကံဆိုးတတျသူမို့ ဂျေါမစှံလူပြိုဘ၀နဲ့ သူပွောတဲ့စကားထဲကလို IAS (I Am Single) ဖွဈနသေူ။
မိနျးကလေးတဈယောကျကို ပွနျပေးဆှဲပါတယျဆိုပွီး ရဲစခနျးရောကျအပွဈတှကေို အစေီပီအရာရှိလကျအောကျမှာ ဆေးကွောရငျး အစေီပီ့သမီးကိုခဈြကွိုကျမိရာကနေ သူ့ဘ၀ ပွောငျးလဲလာတယျလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ဘာတှေ ဘယျလိုပွောငျးလဲမလဲဆိုတာကတော့ ကိုယျ့ဘာသာ ခံစားလိုကျပါတော့။
ဒီကားထဲမှာ အျောဂဲနဈ(သဘာဝနညျးနဲ့)စိုကျပြိုးနညျး ၊ ဓာတုဆေးဝါးသုံးစှဲစိုကျပြိုးနညျးတှရေဲ့ အကြိုးအပွဈတှကေိုမှတျသားလောကျစရာစကားတှနေဲ့ တငျပွထားတာမို့ အခဈြကားလိုလညျး ခံစားရမှာဖွဈသလိုဗဟုသုတရမယျ့ ဇာတျမွူးလေးလညျး ဖွဈပါတယျလို့ ပဲ ညှနျးဆိုလိုကျပါရစေ….
ဒီကားထဲက မင်းသား Nithiinကို အိန္ဒိဇာတ်ကားချစ်သူတွေ သိပ်မသိလောက်ပေမယ့် အပြုံးလှလှပိုင်ရှင်လေးဖြစ်တဲ့မင်းသမီးချောလေး Rashmika Mandanna ရဲ့ ဇာတ်ကားမို့ ကြည့်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တင်ဆက်လိုက်တာပါ။
ဇာတ်ကားအကြောင်း နည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်… ရုတ်တရတ်ကြည့်ရင်တော့ ဒီဇာတ်ကားကဝန်ကြီးချုပ်မင်းသားလို့ခေါ်တဲ့ Mahesh Babu ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဇာတ်ကား(Bharat Ane Nenu)နဲ့ Maharshi ဇာတ်ကားကိုinspiration ယူပြီး ရိုက်ကူးထားတယ်လို့တောင် ထင်ချင်စရာပါပဲ။
ဒါပေမယ့်လည်း ကွဲလွဲနေတာတွေတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ဒီကားထဲကမင်းသားဟာ တေလေဂျပိုး ၊ ကောလိပ်ကနေ အထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူ။ဘ၀မှာ ကံဆိုးတတ်သူမို့ ဂေါ်မစွံလူပျိုဘ၀နဲ့ သူပြောတဲ့စကားထဲကလို IAS (I Am Single) ဖြစ်နေသူ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပြန်ပေးဆွဲပါတယ်ဆိုပြီး ရဲစခန်းရောက်အပြစ်တွေကို အေစီပီအရာရှိလက်အောက်မှာ ဆေးကြောရင်း အေစီပီ့သမီးကိုချစ်ကြိုက်မိရာကနေ သူ့ဘ၀ ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ဘာတွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ခံစားလိုက်ပါတော့။
ဒီကားထဲမှာ အော်ဂဲနစ်(သဘာဝနည်းနဲ့)စိုက်ပျိုးနည်း ၊ ဓာတုဆေးဝါးသုံးစွဲစိုက်ပျိုးနည်းတွေရဲ့ အကျိုးအပြစ်တွေကိုမှတ်သားလောက်စရာစကားတွေနဲ့ တင်ပြထားတာမို့ အချစ်ကားလိုလည်း ခံစားရမှာဖြစ်သလိုဗဟုသုတရမယ့် ဇာတ်မြူးလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပဲ ညွှန်းဆိုလိုက်ပါရစေ….
Emily in Paris (Season 1) ၊ အပိုငျး (၂)